Amateyimu amahle wesifazane amantombazane - amade, amhlophe, asemhlophe, anezinhlayiya, i-lace, ukuphrinta, amahlombe avulekile, ukusikeka ezinhlangothini, phansi kwesimo, isitayela sempi
Imfashini Izifundo zesitayela
Amatekisi azintandokazi - angabani nokuthi angakha kanjani umnsalo wesitayela?
Lapho ukhetha izingubo, abesifazane beminyaka yonke bazama ukulandela izitayela zefashini. Izinto zangempela kanye nokusebenza ezigqokeni zezingubo zebesifazane ziyi-T-shirts, ezamelelwa ezihlukahlukene.
Izitudiyo ezithakazelisayo zabesifazane
Ezinqoqweni eziningi zezinkampani zokuthutha ezidumile kukhona ama-T-shirts amakhredithi amantombazane. Zimelelwa ukuhlukahluka okuhlukahlukene, phakathi kwazo okulandelayo:
imodeli evelele kakhulu ethandwayo, ukuhlobisa ngendlela ye-fringe kungenza njengendlela yokugcizelela imfashini. Lesi isitayela stsha, lapho isisu singenalutho, ngakho-ke kunconywa ukuthi abesifazane abancanyana bakhethwe kuwo;
kulo mkhuba i-T-shirt enehlombe elinyene. Wathandana namantombazane amaningi, ngoba ubanika ububele nokubukeka ngothando. Kungase kube khona umdwebo ovinjiwe noma izinketho zokuhlobisa njenge-embroidery, i-applique;
kubonakala kuhle nge-banding elastic banding phezulu, kukhona ukufana nge blouse, okuyinto enezela ubuchwepheshe kanye nobuhle. Kukhona ukuhlobisa ngendlela ye-flounces, imicibisholo, ukuhlobisa okuvela ebuhlalu noma imininingwane yesicelo;
I-T-shirts i-stylish iqukethe ama-prints namaphethini, asetshenziswa ikakhulukazi ngaphambili. Umdwebo ungafaka isakhiwo esithile, isihloko, noma isithombe esivamile;
hhayi umdwebo kuphela, kodwa futhi ukubhala kunendima ebalulekile. Ingavezwa ngemibala, ubuhlalu, iziqu ze-sequin noma ama-rhinestones;
kwakufunwa yizindaba ezihlanganisa imibhangqwana abathandayo . Isethi enjalo ingathengwa wena futhi unikezwe njengesipho engxenyeni yakho yesibili.
I-T-Shirts Ezindala Ezihlelekile
Lungisa ukushiyeka okuthile kwalesi sibalo ngokukhetha okuhle kwamatekisi amade asekhono afanelekayo. Zihlanganiswe kahle kakhulu nge jeans eziqinile kanye namabhulukwe. Kungenzeka ukuthi uqaphele izici ezinjalo ezihlukile zemikhiqizo:
eside longs longsliv, ehambisana ngokuhambisana sleeve eside;
ayilahlekelwa ukufaneleka kwayo isitayela esinqumayo, ngephambi elifushane futhi ngemuva kwesiphambano. Kukhona okungafaniyo, lapho ubude obungalingani buphawu lwezingxenye ezisemuva;
kungenziwa ukuhambisana nemiklamo ehlukahlukene ngendlela yesithombe, isetshenziswa, i-embroidery noma i-sequin ekhanyayo;
I-T-shirts i-stylish ingaba nokusika okuqinile noma okukhululekile;
njengoba impahla ingasetshenziswa ikotini, intombazane ethandwayo neyodwa, ethatha isimo somzimba, ithambekele ekuthinteni nasekuhlanjuleni ngokungenakuhlonipha.
Amateki asethempelini anezinsimbi zokugqoka
Abadwebi befashini abakhetha ukwakha umnsalo oqhakazile futhi obambekayo bayothola izinhlobonhlobo ezisebenzisa ukuhlobisa ngendlela yama-rhinestones. Zingasetshenziswa emikhiqizweni yanoma yikuphi ukusika, kodwa ikakhulukazi zibukeka njengeThiketi elimhlophe noma umkhiqizo wombala omnyama. Kungenzeka ukuthi uqaphele izinhlobonhlobo ezinjalo zokuhlobisa ngomhlobiso wezinwele:
Iphethini elithile lingasetshenziswa, isibonelo, inkanyezi noma i-butterfly, noma isithombe esingabonakali;
abaklami baqala ukuhlobisa umhlobiso omkhulu ngezingubo zokugqoka, ezisetshenziswa endaweni ebalulekile yomkhiqizo. Amantombazane abakhetha ukuzithiba azokwazi ukuthatha into equkethe inombolo encane yalezi zakhi zokuhlobisa;
I-t-shirts ephathekayo ingasetshenziselwa ukuphuma kusihlwa uma zenziwe ngezindwangu ezinhle ezinjengesilika, i-satin ne-chiffon.
I-T-shirt enezigungu ezivulekile
Izinkathi eziningana ezilandelanayo, kunamamodeli anamahlombe avulekile anika ubulili nesithandani. Phakathi kwabo, singachaza ukuhluka okulandelayo:
I-T-shirt ehlombe elilodwa, elingabhekwa nokusika noma indwangu inganciphisa kule ndawo;
kungavulwa futhi kokubili amahlombe, umkhiqizo wenziwa ngokusebenzisa amasu okuklama afanayo njengento eyodwa;
amamodeli angaba nemikhono emide, abe nesinqunqunu esinqunyiwe nesigqila esiseduze, ubude obuhlukile;
ingaba yimuphi umthunzi, ngakho-ke kubalulekile ukucabangela ukuba khona kokubhaliswa kwemfashini noma isibalo;
ukuhlobisa le nto ukuba khona kwamakhoza noma ama-flounces.
Ishicilelo esitokisini esinokusikeka ezinhlangothini
Isitayela esibucayi kakhulu futhi esisebenzayo yiThide elide elinama-slits asezinhlangothini. Kubonakala ngezici ezinjalo ezihlukile:
ube nesici esikhulu, okuyinto enhle kakhulu ukufihla amaphutha amancane kulo mfanekiso;
ukusikeka kungaba mncane noma ngokuphambene nalokho, kufinyelele emgqeni wesikhumba futhi ube ngaphezulu;
Imidwebo enhle kakhulu enhle kakhulu, lapho kungekho khona imibala ecacile, ukugcizelela okuyinhloko kuzobekwa ubude bokusikeka;
Kukhona futhi inguqulo ye-asymmetric, lapho ingxenye yangaphambili ifushane kakhulu kunemuva.
Umnsalo okhanda futhi ongawukhumbule uzosiza ekudaleni ukubonakala okubonakalayo noma umkhiqizo owenziwe ngokuphelele wesikhumba esincane. Into ebalulekile yokugqoka, yinto enhle nokuntuleka kwesisindo esiningi. Kukhona ukuhlukahluka okunjalo kwamamodeli:
ubude obuhlukile - bungancishiswa, bufana nephezulu, noma i-T-shirt elide elibala;
Ngokuqondene nomklamo wombala, okuthandayo kunikezwa kumbala omnyama noma omhlophe, ibra yezwi elifanayo likhethwe into. Uma ufuna, ungakhetha ukhetho lombala;
Umkhiqizo ungaba yi-monophonic noma uqukathe izakhi zokuhlobisa - imidwebo noma imidwebo.
I-T-shirt enezansi ezingezansi
Isimo esihle kakhulu kubhekwa njengeTshethi elifushane ngaphambi kwesikhashana. Ibonakala ngokunqunywa mahhala, okukwazi ukufihla ezinye zeziphambeko zalesi sibalo. Umkhiqizo ungaba nemininingwane enjalo:
ube nemikhono yangaphandle noma ngaphandle, iqukethe ukunqunywa okuthakazelisayo endaweni ehlombe;
kungenziwa kunoma imuphi umbala;
kungaba khona ukuhlobisa ngendlela yobhaliso, imiqulu, izinhlelo zokusebenza;
Emaphethelweni angasetshenziswa amaphethini afanayo: i-motifs ezimibalabala, izinhlamvu ezinkulu, ama-portraits of celebrities, imidwebo engu-3-D yezilwane.
T-shirts ngesitayela sempi
Ama-fashionistas amaningi anqoba isitayela sezempi T-shirts kubantu besifazane, ngoba izici ezinjalo ezihlukile ziwuphawu:
Kufanelekile ukunakekelwa kwendwangu, kangcono ukuthi kwakuyikotini, indawo yesibili inqobe i-viscose;
Ngokuqondene nokusika, okuthandwa kakhulu yizingubo ezisezingeni elihlelekile, zingaba yimikhono emide noma emifushane;
bheka amamodeli amakhulu we- polo enekhola encane kanye nezinkinobho eziningana;
Ezinye izinto zenziwe ngezingubo zokufaka isikhumba, imininingwane yezintambo kanye ne-suede;
ebusweni kungaba isithombe esithinta izihloko zempi.
T-shirts ezisezingeni elihle nge-lace
Okumangalisayokazi kwebesifazane nabomnene kubheka i-t-shirt enomlenze ongenziwa ngezinhlobonhlobo ezilandelayo:
umkhiqizo owenziwe ngokuphelele ngendwangu yesigqoko;
Ukuhlobisa i-lace kungaba khona kuphela ekoleni, okungaba kokubili okuncane futhi kwe-laconic, futhi okuxubile;
i-lace ingaveza amahlombe noma indawo ye-decolleté;
ukulungiswa kuzonikeza i-lace ngemuva;
I-t-shirts ezenziwe ngendlela ehlelekile yenziwe ngendlela enhle ngemibala emnene neyesikhathi esidlule ukuze kugcizelele ubuhle bokuhlobisa.
I-T-shirt yabesifazane enephrinta
Ngisho nabesifazane abathandayo kakhulu bemfashini abakwazi ukudlula ngento yokuqala yabesifazane ngokunyathelisa. Kunezithombe eziningi, ungakwazi ukuhlukanisa imidwebo enjalo yezitayela ezenziwe ngezingubo:
Imihlobiso ehlobisa nezimbali;
zonke izinhlobo zemibhalo eqoshiwe ezenziwe ngefonti yokuqala;
ukuphrinta okubonisa udumo;
imikhiqizo enezinhlamvu ze-cartoon;
i-logo yenkampani eyaziwayo, isibonelo, i-Nike, i-Adidas, i-Louis Vuitton nezinye izinto;
Isitayela se-Gothic, okuyinto eminyakeni yamuva idumile emhlobiso.
Ama-T-shirts azintandokazi agcwele
Abanikazi bamafomu amahle bangabheka futhi befake imfashini futhi bekhangele, bazikhethele imodeli efanelekayo. Ngenxa yalokhu kufanele ulandele izincomo ezilandelayo:
Ungaphenduki kumathekisthi aqinile kakhulu;
ukukhetha okuhle kuzoba yiT-shirts ezincane zamantombazane, okungafana nokucutshungulwa noma okuqukethe ukusikeka ezinhlangothini;
Okukhethwa kukho okuhle kungase kube imodeli ehlanganisa izembatho kancane;
indawo ecacile ye-decollete kufanele igcizelelwe ngosizo lwesinqunqo se-V;
ukukhomba indawo yezinqama, ungayeka inguqulo nge-band elastic;
Ungazitholi emathunzini omnyama wendabuko, ungakwazi ukukhetha imibala ekhanyayo;
Kunconywa ukuba usondele ngokucophelela ekukhethweni kwezingcaphuno, imidwebo emikhulu kakhulu ingabonakala ingeza amentimitha engeziwe.
Izithombe ezinemifanekiso eneT-shirt
Ngenxa yezinhlobonhlobo zezinhlobonhlobo ezethuliwe, ungadala noma ngabe yisiphi isifuba esesitayela nge-T-shirt. Singakwazi ukuphawula okukhethwa kukho okujwayelekile:
Ngomfanekiso wezemidlalo, kufanele ukhethe imodeli efanelekayo efanelekile ngokusika okulula. Ngesikhathi esifanayo, kunconywa ukuthi ugcizelele ngokushicilela okuqhakazile noma ukubhaliswa okucacile. Into enjalo ihlanganiswe nesiketi sezemidlalo noma ama-shorts.
Ukuze uthole isithombe sebhizinisi, imodeli ye-laconic iyadingeka ngaphandle kokuningi kwezici zokuhlobisa, izobukeka ihambelana nejackethi. Njengoba ukufakwa komnsalo wehhovisi kuzosebenza njengengubo emincane yesilasi noma umkhonto.
Isitayela sothando sisho ukutholakala kokuhlobisa, kungaba ubuhlalu, iziqu, izinsimbi zomculo, i-lace, noma imuphi umdwebo we-thematic. Into enjalo izobukeka ibe nenhle nge- skirt ye-lace ne-necklace enhle.
Ukugubha kusihlwa kuzokwenzela umkhiqizo we-lace no-silika, ohambisana nesiketi esikhangayo noma i-trousers ekhangayo.
Izitayela ze-Jeans - izimfihlo ezilula zokudala isithombe esiphezulu
Amabhuzu enjoloba enhle
Izinto eziyisisekelo ekhabethe leyintombazane
Izicathulo ezine-pantyhose - indlela yokudala isithombe nesimo samathekisthi
Izindlela zanamuhla zokugqoka
Izithombe ezinhle ezembatho
Imibono yokudubula kwesithombe ehlathini
Yiziphi i-jean ezizofanelana namantombazane anezinyosi ezibanzi?
Yini okufanele ugqoke ijaji lesikhumba elimnyama?
Izithuba zokudubula isithombe nentombazane
Izingubo zesizwe zaseBelarusian
Isitayela sezithombe eziphathekayo
I-Photoshoot inganekwane yasebusika
I-Photoshoot isitayela somuntu waseRussia
Ukuthungulwa kwe-Wax nge-wax
Igumbi lokuklama lentombazane eneminyaka engu-16 ubudala
U-Kate Hudson waphuma nesoka elisha
Ukuphila ngokobulili ngemuva kokukhipha isisu
I-Monkey ne-Monkey Woman - Ukuhambisana
Yini okufanele ngiyenze ukuze ngilahlekelwe imilenze yesisindo?
Izindawo zokudlela ze-Surgut
I-Dioscorea i-caucasus - izindawo zokwelapha
Antonovka - okuhle nokubi
Izithombe ezibucayi kakhulu ze-Olympiad Rio 2016
Ibhuku lokubhukuda ophahleni lendlu
I-leukocyte - evamile ezinganeni
Yeka ukuthi okumnandi kanjani ukupheka amadombolo?
Oksolinovaya amafutha - imiyalelo yokusetshenziswa ekukhutheni
I-Caviar esitshalo seqanda kunazo zonke
Ama-nacho ekhaya - imithi
I-hormone evuselela izintambo
I-anesthetics yezinhlungu emalungwini